2 “Monka nkyerɛ mo nuabarimanom sɛ, ‘Me man!’+ na monka nkyerɛ mo nuabeanom sɛ, ‘O ɔbea a wɔahu no mmɔbɔ!’+ 2 Mo ne mo maame nni;+ mo ne no nni asɛm, efisɛ ɔnyɛ me yere+ na menyɛ ne kunu.+ Onyi n’aguamammɔ mfi n’anim na onyi n’awaresɛe mfi ne nufu ntam,+ 3 na mampa ne ho ntama+ amma wanyɛ sɛ da a wɔwoo no,+ na manyɛ no sɛ sare so,+ na wanyɛ sɛ asase kesee,+ na mamma osukɔm ankum no.+ 4 Na merenhu ne mma mmɔbɔ,+ efisɛ wɔyɛ aguamammɔ mu mma.+ 5 Wɔn maame abɔ aguaman.+ Na nea onyinsɛn wɔn no ayɛ aniwude,+ na ɔkae sɛ, ‘Mepɛ sɛ mikodi m’adɔfo akyi,+ wɔn a wɔma me aduan ne nsu ne kuntu ne ntama ne ngo ne nsã no.’+ 6 “Enti mede nsɔe begye ban asiw wo kwan, na mede abo bɛto ɔfasu+ na wanhu ne kwan.+ 7 Na obetiw n’adɔfo, nanso ɔrento wɔn;+ ɔbɛhwehwɛ wɔn, nanso ɔrenhu wɔn. Na ɔbɛka sɛ, ‘Mepɛ sɛ mesan kɔ me kunu+ dedaw no nkyɛn,+ efisɛ saa bere no na eye ma me sen nnɛ.’+ 8 Nanso wanhu+ sɛ me na memaa no awi+ ne nsã dɔkɔdɔkɔ ne ngo, na me na memaa ne dwetɛ ne ne sika kɔkɔɔ dɔɔso, nea wɔde som Baal no.+ 9 “‘Enti mɛsan abegye m’awi ne me nsã dɔkɔdɔkɔ afi ne nsam wɔ ne bere mu,+ na meyi me kuntu ne me ntama a ɔde kata n’adagyaw so no afi ne ho.+ 10 Na mɛma ne ho ada so wɔ n’adɔfo anim,+ na ɔbarima biara nni hɔ a obehwim no afi me nsam.+ 11 Na mɛma n’ahurusidi,+ afahyɛ,+ ɔsram foforo,+ homeda, ne ne nnapɔnna nyinaa to atwa. 12 Na mɛsɛe ne bobe+ ne ne borɔdɔma+ nnua a ɔkaa ho asɛm sɛ: “Ɛyɛ akyɛde a m’adɔfo de maa me” no, na mɛma adan kwae+ na wuram mmoa awe. 13 Na esiane sɛ ɔde ogya bɔɔ afɔre+ maa Baal ahoni,+ na ɔde kawa ne agude hyehyɛɛ ne ho+ dii n’adɔfo akyi,+ na ne werɛ fii me nti,+ mɛma wabu saa nna no ho akontaa,’+ Yehowa asɛm ni. 14 “‘Enti me ne no bɛkasa na mama wakɔ sare so;+ mɛkasa ma aka ne koma.+ 15 Efi saa bere no rekɔ no, mede ne bobe nturo bɛma no,+ na Akor bon+ no bɛdan anidaso pon. Ɛhɔ na obegye so sɛnea ɔyɛe ne mmabaaberem no,+ te sɛ bere a ofi Egypt asase so bae no.+ 16 Saa da no, wobɛfrɛ me “Me kunu,” na woremfrɛ me “Me wura”* bio,’+ Yehowa asɛm ni. 17 “‘Na meyi Baal ahoni din afi n’anom,+ na wɔremfa wɔn din nkae wɔn bio.+ 18 Na me ne wuram mmoa, ne wim nnomaa, ne mmoa a wɔwea fam bɛyɛ apam saa da no ama wɔn,+ na mebubu agyan ne nkrante mu na mayi akodi afi asase no so,+ na mɛma wɔatena hɔ dwoodwoo.+ 19 Mesi wo asiwa ma woayɛ me dea daa;+ mesi wo asiwa wɔ trenee ne atɛntrenee ne adɔe ne mmɔborɔhunu mu.+ 20 Mesi wo asiwa wɔ nokwaredi mu; na afei wubehu Yehowa.’+ 21 “Yehowa asɛm ni: ‘Saa da no, megye so; megye ɔsoro so na ɛno nso agye asase so,+ 22 na asase no nso begye awi+ ne nsã ne ngo so; na eyinom nso begye Yesreel* so.+ 23 Na medua no sɛ aba wɔ asase so,+ na nea wɔanhu no mmɔbɔ no, mehu no mmɔbɔ,+ na mɛka akyerɛ wɔn a wɔnyɛ me man no sɛ: “Woyɛ me man,”+ na wɔn nso aka sɛ: “Woyɛ me Nyankopɔn.”’”+
^ Anaa, “Me baal.”
^ Ɛkyerɛ “Onyankopɔn bedua aba.”